Akụkọ - Họrọ sistemụ irighiri mmiri Micro, chekwaa mmiri mmiri ọ bụla!
Họrọ sistemụ irighiri mmiri Micro, chekwaa mmiri mmiri ọ bụla!
Kemgbe mmalite nke afọ a, ọtụtụ mba na -ebupụ ngwaahịa na -ebupụ ọka n'ahịa gburugburu ụwa na -ata ahụhụ n'ihi ụkọ mmiri ozuzo, nke nwere mmetụta dị ukwuu na akụnụba ụwa.
Dịka ọmụmaatụ, United States na Brazil enwewo oké ọkọchị. Ahịhịa, ọka, na soybean atawo ahụhụ n'ihi ụkọ mmiri ozuzo, nke mere ka ọnụ ahịa nri n'ụwa niile ka njọ. Tụkwasị na nke ahụ, akụkụ nke Russia na Canada na -enwekwa oke okpomọkụ na oke ọkọchị. Ọtụtụ mba dị mkpa na-emepụta ọka na mba ndị na-ebupụ ọka na-eche nsogbu oke ọkọchị ihu.
Nke a chọrọ ka dabara adaba ogbugba mmiri n'ubi usoro na ihe ndị ọzọ ogbugba mmiri n'ubi ụzọ, nke nwere ike iwepụta nri karịa obere mmiri.
Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, idei mmiri ọdịnala ogbugba mmiri n'ubichọrọ mmiri 60-80 m³ maka acre ala, ịgba mmiri mmiri mmiri chọrọ 40-50 m³, na ịgba mmiri mmiri chọrọ naanị 25-30 m³. Uru nke ịchekwa mmiri pụtara nnọọ ìhè!
N'ebe akọrọ na oke okpomoku, ọbụlagodi tụlee iji ogbugba mmiri mmiri n'okpuru ala (nke nwere ike belata ọnwụ nsị, mmiri na fatịlaịza na -ebuga ya na mgbọrọgwụ, yana arụmọrụ dị elu; ọ nwere ike ijikwa uto nke ahịhịa n'ụzọ dị irè, belata ego nke ahịhịa ahịhịa, ma nwekwuo omume enyi na gburugburu ebe obibi; Mmetụta nke iji mmiri mmiri na -agba mmiri n'okpuru ala na oke okpomọkụ na mpaghara ọkọchị dị mma).
Ọbụlagodi na mpaghara oke mmiri ozuzo zuru oke, ị ka nwere ike họrọ usoro ịgba mmiri ma ọ bụ sistemụ ogbugba mmiri mmiri Micro. Ịgba mmiri mmiri n'ụzọ ziri ezi abụghị naanị dị mfe dị ka ịchekwa mmiri, enwere ọtụtụ uru, dịka:
Oge ezipụ: Jul-22-2021